> Resource > Ladnaansho > Sony Vaio Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Sony Vaio
Waxaan dib u soo ceshano karaa tirtiray Faylal ay ka My Sony Vaio Laptop?
Waxaan la yaabanahay sida aan soo kaban karto, files tirtiray ka Sony Vaio laptop, kuwaasi oo ay ka tirtiray oo weelna Recycle Bin dhowr saacadood ka hor. Files Kuwani waa muhiim ii. Waxaan aaminsan inay weli ka jira on my laptop. Fadlan ii caawin!!
Haa, faylasha tirtiray ayaa weli aad laptop Sony Vaio oo gabi ahaanba waa in aad iyaga u soo ceshano karaa iyadoo la kaashanayo barnaamijka ka soo kabashada xogta Sony Vaio. Mid ka mid ah hal dhibic in aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso waa files lumay si fudud loo overwritten karaa iyadoo xogta cusub ku laptop. Sidaas, joojin adiga oo isticmaaleya isticmaale laptop Sony Vaio waa lagama maarmaan haddii aad rabto inuu ka soo kabsado dhammaan macluumaadka aad laga badiyay.
Wondershare Data Recovery gaar ah oo loogu talagalay barnaamijka Vaio kabashada xogta si aad u hanato tirtiray, formatted iyo faylasha laga wadid aad Vaio laptop ee adag. Barnaamijkan wuxuu u fududahay in la isticmaalo iyo khatar la'aan waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano faylasha sida videos, sawirada, waraaqaha xafiiska, files qoraalka, emails, files archive iyo in ka badan. Hadda waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah qalab si loo farsameeyo kabashada xogta Sony Vaio ku qasabno yar mouse ah.
Kabsado Xogta laga Laptop Sony Vaio in 3 Talaabooyinka
Waxaa lagu talinayaa si loo soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab kala duwan oo ka mid ah in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 1 hab kabashada Select si ay u bilaabaan soo kabashada xogta Sony Vaio
Burcad Wondershare Data Recovery oo aad arki doonaa interface bilowga sida image hoose. Fadlan akhri tilmaamaha ka mid ah hababka dib u soo kabashada bixiyo furmo si taxadar leh in la ogaado sida barnaamijku u shaqeeynayo.
Si aad u soo ceshano xogta ka laptop Sony Vaio, ha isku dayno "lumay Recovery File" mode marka hore.
Tallaabada 2 baarista Vaio ayaa xijaab si ay u eegaan files lumay
Barnaamijku wuxuu muujin doonaa maqaal qoruhu aad laptop Sony Vaio. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah oo guji "bilow" in iskaan xogta laga badiyay.
Fiiro gaar ah: Haddii files aad Sony Vaio lumay, maxaa yeelay formatting xijaab, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo suuqa
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka laptop Sony Vaio
Dhammaan files in la soo kabsaday karo ayaa la soo bandhigi doonaa bidix ee daaqadda. Waxaad ka arki kartaa magacyada file si loo hubiyo in xogta aad badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Markaas waxaad kartaa files doonayay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin aad laptop Sony Vaio badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten mar kale, waxaad si fiican u sii lahaa ee files soo kabsaday si xijaab kale ee aad laptop.